အိတ်ဆောင်စူပါ Fast-Heat Handheld Steamer ကို ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အိတ်ဆောင်စူပါ Fast-Heat Handheld Steamer
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ ပိုလန် ရုရှားပြည်ထောင်စု စပိန် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပြင်သစ် ဘယ်လ်ဂျီယမ်
ပန်းရောင် / တရုတ် ပန်းရောင် / ပိုလန် ပန်းရောင် / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ပန်းရောင် / စပိန်နိုင်ငံ ပန်းရောင် / အမေရိကန် ပန်းရောင် / ပြင်သစ် ပန်းရောင် / ဘယ်လ်ဂျီယံ
အိတ်ဆောင်စူပါ Fast-Heat Handheld Steamer - ပန်းရောင် / တရုတ် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပါဝါ (W): 1501-1799W
ရေတိုင်ကီစွမ်းရည် (ဌ): <0.8L
ရေနွေးငွေ့ကြာချိန် (မိနစ်): ၈၀ မိနစ်
ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း - ABS, PC၊ လျှပ်စစ်အပူပေးစက်။
ပါဝါအရှည်: 1.8 မီတာ, အပြည့်အဝကြေးနီကြိုး။
ဗို့အား: 110V-240V (USplug / EU Plug)
ထုတ်ကုန်စွမ်းအား: 1500W / 50-60Hz
အပူ mode: လျှပ်စစ်အပူအမျိုးအစား။
အသုံးပြုမှုနယ်ပယ် - အ ၀ တ်အထည်များ၊ ရှပ်အင်္ကျီများ၊ အတွင်းခံများ၊ အိတ်များ၊
ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်ချက် - သံ၊ အစိုဓာတ်၊ ပိုးသန့်ဆေးနှင့်ပိုးသတ်ခြင်း
1500W အလင်းအညွှန်းကိန်းလက်ကိုင်မီးပူ Steamer အဝတ်အထည်များ Steam သံနှင့်အတူ Steamers မီးပူတိုက်အဝတ်အထည်များအတွက်သံချေးများ Sterilizing ပိုးသတ်ဆေးပိုးသတ်ဆေးအသေးစားအိမ်သုံးပစ္စည်း
ဤထုတ်ကုန်သည်ထိရောက်သောနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေးနှင့်သံမဏိထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအပူချိန်မြင့်မြင့်နှင့်ဖိအားမြင့်သောရေနွေးငွေ့များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ သံ၊ မြုံခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းစသည်တို့ကိုလွယ်ကူ။ အိမ်၊ ဟိုတယ်နှင့်ပြင်ပခရီးသွားများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ။
Power supply ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားမြင့်သောရေနွေးငွေ့များကိုနှစ်မိနစ်အတွင်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေးနှင့်အဝတ်လျှော်ရန်အတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။
မီးပူ - အပူချိန်မြင့်သောရေနွေးငွေ့သည်အဝတ်အစားများ၊ ကုလားကာများ၊ အခင်းများ၊ ခေါင်းအုံးများစသည်တို့ကိုအလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ အ ၀ တ်လျှော်စက်အပြင်အ ၀ တ်လျှော်သွားခြင်းနှင့်အနံ့များကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပိုးသတ်ခြင်း - မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ပြင်းထန်သောရေနွေးငွေ့များသည်အန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားအမျိုးမျိုးကိုလျင်မြန်စွာသေစေပြီးအိမ်တွင်းသန့်ရှင်းမှုကိုသေချာစေသည်။
သန့်ရှင်းခြင်း။ အပူချိန်မြင့်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောရေနွေးငွေ့များသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအစွန်းအထင်းများ၊ ဖုန်များနှင့်မှိုအစက်အပြောက်များနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများအက်ကွဲခြင်းများကိုလွယ်ကူစွာဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောရေနွေးငွေ့များကိုတချိန်တည်းတွင်ထုတ်လွှတ်သည့်အပြင်၊ အရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်ကိုပွတ်တိုက်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူမြန်ဆန်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာထူးခြားသည်။
ရေတိုင်ကီခွဲခြင်း - အလွယ်တကူဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ရေထည့်ခြင်းသည်စျေးကွက်တွင်ရေပန်းစားသောဒေါင်လိုက်ဆွဲထားသည့်ရေနွေးငွေ့စက်၏ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
power supply ကိုချိတ်ဆက်ပါ၊ ပါဝါအညွှန်းကိန်းမီးများသည်တောက်လောင်နေပြီးအပူခန္ဓာကိုယ်ကမီးစတင်မှီတိုင်အောင်သင်စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လည်ပတ်နေစဉ် ၂ စက္ကန့်တိုင်းတွင်ရေနွေးငွေ့ခလုတ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖိအားလျော့ကျစေပြီးအပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားမြင့်ရေနွေးငွေ့များကိုရှေ့ nozzle မှထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
မှတ်စု: စာနယ်ဇင်းများမြန်လေလေရေနွေးငွေ့ပမာဏတိုးလာသော်လည်းယာယီအပူချိန်နိမ့်ကျသောကြောင့်ဖြီးရေနွေးငွေ့မလုံလောက်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့်အ ၀ တ်လျှော်စက်များတွင်ရေငွေ့များကိုနှေးကွေးစွာအသုံးပြုခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်သောရေနွေးငွေ့များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုပိုမိုသင့်လျော်သည်။
ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်အလုပ်ခွင်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်အဖျားအနာရလိမ့်မည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုအပူချိန်လွန်ကဲစွာကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရပါသည်။
1 X လက်ကိုင်သံ Steamer
1 X ရှည်သောဆံပင်ဖြူခေါင်း
မှာယူထားသောကုန်ပစ္စည်းများ 13.11 ။ မင့်ခ်စ်ခ်တွင်နှစ်သစ်ကူးအတွက်လက်ဆောင် ၃၁.၁၂ ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ငါပဲ Tulle ပေါ်မှာတွေ့ကြုံခံစား။ အစပိုင်းမှာတော့ချက်ချင်းပဲမောင်းသွားတယ်၊ ထို့နောက်သူမကပူစီနံကိုကြာကြာကိုင်ထားလေသည်။ ငါထင်တယ်၊ အကြောင်းရင်းအချို့ကြောင့်အချို့သောနေရာများတွင်ပန်းရောင်တောက်ပသောကွာရှင်းခြင်းတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ငါရေနွေးငွေ့ကိုကြိုက်တယ်! Cool ချောမွေ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်။
Falta probarla ။
ခန့်မှန်းခြေထက်ပိုမြန်ရက်ပေါင်းများစွာပေးပို့! တောင်မှ 31.12 ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ နှစ်သစ်ကူးအတွက်လက်ဆောင်ပဲ။ အဆင်ပြေပါတယ်၊ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်ထက်ပင်ပိုလုပ်ဆောင်သည်။ ငါဟာ့ဒ်ဝဲများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စျေးနှုန်းထင်! ငါမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ဓာတ်ပုံပူးတွဲ! အမြန်လက်တွင်ဤသည်ကထွက်လှည့်ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီပေါ်ကတံဆိပ်ကရာဘာပါ၊
မစမ်းသပ်ရသေးသော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ ၂၇ ရက်နေ့တွင်မှာယူပြီး ၃၁ ရက်တွင်လက်ခံရရှိသည်